Maxaad ka Taaqaanaa Bilada Nabada ee Nobel Peace Prize iyo Alfred Nobel? | Somaliska
Biladaha Nobel waa kuwo aad caan uga ah caalamka, oo loo aqoonsanyahay bilida ugu qiimaha badan caalamka. Laakiin maxaad ka taqaanaa ninka abuuray biladan? ﻿﻿﻿Alfred Bernhard Nobel waxa uu ku dhashay Stockholm, Sweden 21-kii Oktoobar 1833. Waxa uu ahaa nin Iswiidhish ah oo ahaa Saynisyahan, Injineer, Hal Abuure, Nin hubka sameeya iyo asagoo alifay maadada laga sameeyo qaraxyada. Waxa uu ahaa milkiilaha shirkada Bofors oo ahayd shirkad wayn oo hubka sameysa, taas oo uu horey uga soo badalay warshad sameysa birta. Dardaarankiisii ayuu ku dalbaday sameynta Bilad Sharafka Nobel Peace Prize taas oo asaga loogu magacdaray. Alfred Nobel waxuu Maraynka waxbarasho u tagay markuu jiray 18 sano isagoo bartay maadada Kimistiriga. Aabihiis nin warshad leh ayuu ahaa, markuu ku soo laabtay Sweden oo ay burburtay warshadii aabihiis, Alfred waxa uu waqtigiisa siiyay barashada qaraxyada. Qarax weyn oo ka dhacay warshadiisa 3 bishii september 1864 ee ku taalay Heleneborg oo ka tirsan Stockholm ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo uu ku jiro walaalkiis. Alfred Nobel ayaa sidoo kale ku hadli jiray 6 luuqadood oo kala ah Iswiidhish, jermal, Faransiis, ruush, iyo talyaani. Alfred Nobel ayaa go'aanka in uu sameeyo Biladaha Nobel gaaray ka dib markii walaalkiis ku dhintay Faransiiska, ayadoo warbaahinta Faransiisku qoreen in uu ganacsadihii dhimashada geeriyooday. Aasaaskii bilad sharafka Nobel Peace Prize waxa uu ahaa 1895, ayadoo Alfred Nobel uga tagay dhamaan dhaqaalihiisii oo gaarayay ilaa 250 milyan oo dolar .Ilaa 1901 bilada ayaa waxay sharaftay rag iyo dumar aad horumar uga sameeyay xaga Fiisigiska, Kimistriga, luuqadaha, nabada iyo hada oo lagu daray dhakhaalaha. Qofkasta ee la siiyo bilada ayaa waxa la siiyaa bilad dahab ah, shahaado iyo lacag khadar keedu kala duwan yahay. Lacagta la bixiyo sanadkasta waxay ku xirantahay lacagta soo gasha Hay'ada Nobel, sanadkii 2009-ka waxaa la bixiyay 10 milyan oo karoon (1.4 milyan oo dollar). Biladaha Nobel ayaa waxaa bixiya machadyo kala duwan sida Machadka Sayniska ee Boqortooyada Sweden oo bixiya Biladaha Fiisigiska, Kimistiriga iyo Dhaqaalaha. Jaamacada Karolinska ayaa bixisa Biladaha Caafimaadka, sidoo kale Akadamiyada Sweden ayaa bixisa Bilada Luuqadaha. Bilada Nabada ee Nobel Peace Prize ma bixiyaan machadyada Sweden ee waxaa bixiya Gudiga Nobelka ee Norway. Sida uu amray Alfred Nobel xubnaha Hay'ada Nobel ayaa la doonayaa in ay ka koob naadaan 5 qof oo Iswiidhish ah ama Norway u dhashay, xafiiskeeduna waa in uu nokhdaa Stockholm. ilaa 3000 kun oo qof ayaa loo doortaa in ay ka qayb noqdaan musharaxiinta biladaha Nobel sanadkiiba. Dadka loo magacaabo musharaxnimada looma sheego in ay musharax yihiin, magacoodana lama sheego. Doorashada qofka helaya bilada ayaa waxaa cod u qaada macaahida ay quseyso iyadoo qofka codka ugu badan hela uu helo bilada. Xaflada bixinta biladaha ayaa ka dhacda magaalada Stockholm 10-ka diseembar sanadkasta. Xaflada bixinta bilada Nabada ee Nobel Peace Prize ayaa waxay ka dhacdaa magaalada Oslo ee Norway, ayadoo la qabto inta badan 10-ka diseembar sanadkasta. Alfred Nobel ayaa geeriyooday 10-kii December 1896, isagoo ku sugnaa xaflad ka dhacaysa magaalada Sanremo, Italy.
Biladaha Nobel waa kuwo aad caan uga ah caalamka, oo loo aqoonsanyahay bilida ugu qiimaha badan caalamka. Laakiin maxaad ka taqaanaa ninka abuuray biladan? ﻿﻿﻿Alfred Bernhard Nobel waxa uu ku dhashay Stockholm, Sweden 21-kii Oktoobar 1833. Waxa uu ahaa nin Iswiidhish ah oo ahaa Saynisyahan, Injineer, Hal Abuure, Nin hubka sameeya iyo asagoo alifay maadada laga sameeyo qaraxyada.
Dardaarankiisii ayuu ku dalbaday sameynta Bilad Sharafka Nobel Peace Prize taas oo asaga loogu magacdaray.
Alfred Nobel waxuu Maraynka waxbarasho u tagay markuu jiray 18 sano isagoo bartay maadada Kimistiriga. Aabihiis nin warshad leh ayuu ahaa, markuu ku soo laabtay Sweden oo ay burburtay warshadii aabihiis, Alfred waxa uu waqtigiisa siiyay barashada qaraxyada. Qarax weyn oo ka dhacay warshadiisa 3 bishii september 1864 ee ku taalay Heleneborg oo ka tirsan Stockholm ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo uu ku jiro walaalkiis.
Aasaaskii bilad sharafka Nobel Peace Prize waxa uu ahaa 1895, ayadoo Alfred Nobel uga tagay dhamaan dhaqaalihiisii oo gaarayay ilaa 250 milyan oo dolar .Ilaa 1901 bilada ayaa waxay sharaftay rag iyo dumar aad horumar uga sameeyay xaga Fiisigiska, Kimistriga, luuqadaha, nabada iyo hada oo lagu daray dhakhaalaha.
Biladaha Nobel ayaa waxaa bixiya machadyo kala duwan sida Machadka Sayniska ee Boqortooyada Sweden oo bixiya Biladaha Fiisigiska, Kimistiriga iyo Dhaqaalaha. Jaamacada Karolinska ayaa bixisa Biladaha Caafimaadka, sidoo kale Akadamiyada Sweden ayaa bixisa Bilada Luuqadaha. Bilada Nabada ee Nobel Peace Prize ma bixiyaan machadyada Sweden ee waxaa bixiya Gudiga Nobelka ee Norway.
ilaa 3000 kun oo qof ayaa loo doortaa in ay ka qayb noqdaan musharaxiinta biladaha Nobel sanadkiiba. Dadka loo magacaabo musharaxnimada looma sheego in ay musharax yihiin, magacoodana lama sheego.
Doorashada qofka helaya bilada ayaa waxaa cod u qaada macaahida ay quseyso iyadoo qofka codka ugu badan hela uu helo bilada.
May 14, 2010 at 13:13
Walaal waan ku salaamay.
Waxaan fahmi waayay ciwaanka waxa uu ku saabsan yahay. ma nobel price ama nobelpriset lagu yiraahdo isweeshka ayuu ku saabsan yahay?
salaan walaal, haa wuxuu ku saabsan yahay Nobel prize iyo ninkii aasaasay ee lagu magacaabo Alfred Nobel. asaga ayaa loogu magac daray bilada.
wad mahadsanatahy sbx isda aan noogu faaideysay …tan kale nobel peace prize-ka xage qofka lagu gudon siyaa norway ama sweden
May 21, 2010 at 13:08
Sxb waad mahadsantahay, Nobel Peace Prize waxaa lagu bixiyaa Oslo Norway, biladaha kale ee Nobelka sida kuwa caafimaadka iyo luqadaha waxaa lagu bixiyaa Stockholm.